Sidee baan ku codsan kartaa magangelyo? | Warbixin ka USAHello | USAHello
Boggan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan waxa ay magangalyo iyo sida loo dalbado magangalyo ee USA.
OGEYSIIS MUHIIM AH: Xeerarka doonka Mareykanka waxaa la beddelo iyo waxa laga yaabaa in aanay suurto gal ah in aad dalbato magangalyo ee xuduudda-US Mexico. Akhri updates ugu dambeeyey ee dadka magangelyo doonka ah.
Asylum waa marka aad hesho ilaalinta dawladda Maraykanka, maxaa yeelay, aad si nabad ah aan ku noqon karin dalkaaga hooyo. Sanad walba dad u yimid inuu USA raadinaya ilaalin waayo, waxay ka soo gaaray cadaadis ama cabsi ah in ay la silcin doonaa sabab u tahay: tartanka, diinta, dhalashadiisa, xubinimada koox bulsho gaar ah, ama fikrad siyaasadeed.
Guudmarka nidaamka magangelyada ee edeb USA ee First Xuquuqda Aadanaha
Maamulka Maraykanka ayaa isku dayaya in ay joojiyaan dadka ka soo doonka ee USA. magangelyo doonka ah lagu hayo ee xerooyinka ama xarumaha dadka lagu hayo. Carruurta ayaa laga qaaday waalidkood. Read updates dadka magangelyo doonka ah oo ku taala xuduuda Maraykanka.
Si aad u hesho magangelyo USA, waxay ka caawisaa kiiskaaga haddii aad leedahay caddayn si ay u caddeeyaan aad ugu silcin jiray ama lagu xadgudbo, iyo in dowladda ma aad ilaaliso. cadayn badan oo aad fursad u fiican aad leedahay inay ku guuleysato kiiskaada magangelyo si ay u awoodaan in ay sii joogaan dalka Mareykanka. U hubso in had iyo jeer runta sheeg, haddii kale aad isla markiiba kiiskaaga diidi karaa. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in aad u gaar ah oo ku saabsan faahfaahinta. Waxaa muhiim ah in waqti la xasuusnaado waxa ku dhacay, on taariikhda saxda ah. Haddii aad khalad samayso, Dowladda wuxuu ku fikiraa inaad been.
waraaqaha aqoonsiga (i.e. baasaboorkaaga, shahaadada dhalashada, kaarka aqoonsiga ardayga, diiwaanka qoyska, kaarka aqoonsiga qaranka, ama kaadhka xubinimada xisbiga siyaasadeed)
Wax codsiyada qabyo magangelyo ama waraaqadaha marrag-kaca in aad abuuray laga yaabaa in
khayraadka More on our website
Ka caawi on xadka ama kuwa lagu hayo
Ma waxaad tahay labada dhinac ee xadka United States / Mexico oo aanad hubin waxa la sameeyo soo socda? Ma waxaad raadineysaa hoy, taageero sharci, cuntada, iyo in laga caawiyo magangelyo? aad ka yar tahay 18? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah ururada laga yaabo in ay awoodaan in ay kaa caawiyaan in aad siiyaan baahiyaha asaasiga ah iyo talo ah ee aad kiiska.
Resources iyo warbixin si ay u caawiyaan aad u ogaato xuquuqdaada xuduuda iyo sidii soo galootiga ah ee USA.
Sida loo helo adeegyo sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar
Booqo khayraadka sharci bogga si aad u hesho lacag la'aan ah ama qiimo-yar caawimaad sharci.
Isticmaal our jiheeyaha khayraadka maxalliga ah si aad u hesho khayraadka iyo adeegyada aad u dhow. First geli afkaaga. Markaasuu u soo galo magaalo aad. Markaas dooran “resetttlement iyo magangalyo.”
khayraadka kale ee kaa caawinaya in aad ka dalbato magangalyo
Sida loo dalbado magangalyada ee dalka Mareykanka
United States Citizenship & Adeegyada Socdaalka: codsigaaga magangalyada
su'aalo dadka magangelyo doonka ah lays weydiiyo
sharciga magangelyada iyo habka
Tilmaamaha in warqadaha kiiska
bandhigga A ku saabsan sida loo wada saaray waraaqaha kiiska magangelyada.
In this video, qareen ka dhigaa in uu noqdo sarkaalka magangalyo iyo weydiiyo su'aalo lahaa sida caadiga ah in lagu weydiiyo inaad wareysi. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad diyaariso jawaabaha kuu gaar ah su'aalaha ay ku weydiin doonaa inaad.
video Tani waa ku saabsan sida loo guuleysto kiiskaada magangelyo xitaa haddii aadan haysan cadeyn u tahay in aad la Dhibay. Waxaa la samayn karaa haddii aad muujin karto in ay jiraan nidaam ama hab-dhaqanka waxyeelo ee dalka.
Dalbashada magangalyo - guuleystay kiiskaaga
In this video, Adeega hore ee Immigration and Naturalization Xeer Carl Shusterman ka hadlayaa oo ku saabsan sida aad ku guuleysan karto kiiskaada magangelyo iyada oo si taxaddar leh diyaarinta.
siyaabo dhowr ah kiiska magangelyada waxaa la samayn karaa ee USA
video Tani waxay leedahay macluumaad badan oo ku saabsan sida aad u codsan karo oo u qalanto magangelyo Maraykanka.
buugagan Kuwan waxaa loogu talagalay si ay u bixiyaan macluumaad aasaasi ah si ay u soo guuray la siiyo fahamka xuquuqda ay u leeyihiin ka yar laga xoreeyo. sharciga lagu jiro socdaalka ama haddii ay soo qabqabteen oo xireen by the Department of Homeland Security. Macluumaadka ku jira buugagan waa in aan loo tixgalin in talo sharci, oo xiray dalka u soo guuray iyo kuwii ay jeclaayeen waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay raadsadaan talo sharci oo u qalma oo ka tirsan xarunta Immigrant Justice National ama urur kale oo lagu kalsoonaan karo.
Haddii aadan haysan qareen
Haddii ay jirto ayaa amar soo saartay ee aad ka saarista ama masaafurinta, aad weli fursad u dalbaneysid magangelyo, xitaa haddii aadan haysan qareen.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha gudbinta magangalyo oo aan qareen:
Options dadka magangelyo doonka ah - oo loogu talagalay dadka ku jira saarista laakiin aadan haysan qareen
“Waxaan ahay cabsanayaan in Back Tag” - hage magangalyo, heyn raritaan, iyo shir ka dhanka ah jirdilka
Ilaha Pro doonka Se Asylum - waayo, kuwa saarista
Ogow doonka Rights LGBTQ Asylum waa dokumenti loogu talagalay dadka ka cabsadeen inay dalkoodii ku noqdaan oo ay ugu Wacan inay Yihiin lesbian, gay, labeeb ama jinsi (LGBT) iyo / ama ay sabab u tahay xaaladda HIV. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa document ee Isbaanish, Faransiiska iyo Carabi.
Waxaa laga yaabaa inaad difaac ka dhan ah masaafurin Haddaad ka Cabsataan laguu dhimi doono ama jirdilay haddii aad soo tarxiilay dalkaagii hooyo. Xarunta Immigrant Justice Qaranka waxaa laga heli karaa si ay u bixiyaan talo sharci ah siiyaan gudbinta sharci. Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Qaranka ee Immigrant Justice lambarka toll free ay: (312) 263-0901.
Dalbashada xaaladda qaxootiga / magangelyo siyaasadeed ee USA: geeddi socodka iyo ururada oo kaa caawin
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah khayraadka waxtar u leh macluumaadka iyo gargaarka.
Dalbashada xaaladda qaxootiga / magangelyo siyaasadeed ka baxsan USA
Xuquuqda in Exile barnaamijka
page Tani waxa ay muujinaysaa adeegyada sharciga ee bilaashka ah ama jaban ee laga helo dalalka adduunka oo dhan. Hubi adeegyada sharciga ee dalka.
USCIS isbedel: nidaamka cusub ee codsadayaasha magangelyo 2018 ee dalka Mareykanka
Magangalyo-doonka - macluumaad cusub oo loogu talagalay qoysaska ka Mexico, Bartamaha iyo Koonfurta America
Macluumaadka on this page ka timaadaa UNHCR, USCIS oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci. Haddii aad raadineyso qareen lacag la'aan ah ama qiime jaban ah ama caawimaad sharci, waxaan kaa caawin karnaa hesho adeegyada sharci oo bilaash ah iyo qiimo-yar.